लक्ष्मीनारायण बस्नेत / , के तपाईं कोरोनाकै कारण भिसा रद्द गरेर वा बिदा मिलाएर नेपाल जान लाग्नुभएको छ वा अलिक पछी जाम्ला भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? पख्नुहोस ! एकैछिन गहिरिएर सोच्नुस त ! कतै तपाईंले आफ्नो परिवार , छिमेकी ,समाज अनि देशलाई पनि सङ्कटमा त पार्दैहुनुहुन्न ?कोरियामा पनि चिनबाट आएकी एक महिलाको कारण नै स्थिति बिकराल हुनपुगेको हो !
भोली तपाईंको कारणले नेपालमा पनि स्थिति भयावह हुनसक्छ ! शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेको १४ दिन पछि मात्रै लक्षण देखा पर्छ भनिन्छ !तपाईंले सतर्कता अपनाउदा अपनाउदै पनि तपाईं सङ्ग काम गर्ने साहु , कोरिएनहरु दैनिक बाहिरदेखी काममा आउछन् , उनीहरुको साथमा काम गर्दा तपाईंको शरीरमा पनि भाइरस प्रवेश गरेको हुनसक्छ
वा तपाईं नेपाल जादै गर्दा तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको ट्याक्सी , बस , ट्रेन आदिका सिट , समाउने हत्ता तपाईं चडनु अघि भाइरस सङ्क्रमित ब्यक्तिले प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ ! धातु जन्य पदार्थमा १२ घन्टा सम्म भाइरस जिवित रहन सक्छ भनिएको छ र तपाईं नेपाल जादैगर्दा तपाईंको साथमा भाइरस पनि नेपाल भित्रीनसक्छ !
कोरियामा आजमात्रै ५०५ जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिए,दैनिक नयाँ सङ्क्रमितको सङख्यामध्ये आजको सङ्ख्या सबैभन्दा उच्च !